Blackjack | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Blackjack | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Otu n'ime ndị kasị na-egwuri cha cha egwuregwu n'ụwa, Blackjack bụ maa kwesịrị oge gị na ego. a oghere igwe free bonus ezigbo ego egwuregwu bụ a nnọọ mfe egwuregwu nke chọrọ obere nkà na atụmatụ na ka bụghị nanị dabeere chioma onwe ya. Echiche Ziri Ezi Games kwadoro mbipute a classic game obụrede mbụre nke amamiihe ndịna na-enye ohere ka ị na na ise aka na a oge.
Banyere Developer nke Blackjack
Echiche Ziri Ezi Games na-tọrọ ntọala na United Alaeze 2002. The ụlọ ọrụ ka e, kere na-ekesa a dịgasị iche iche nke video ohere mpere, cha cha egwuregwu, sere na taabụ, na keno utu aha. Ha e mere egwuregwu n'ihi na ekwentị mkpanaaka nke ị pụrụ ịnụ ụtọ na gị na ama ma ọ bụ mbadamba nkume. Nke a oghere igwe free bonus ezigbo ego egwuregwu na-na-mepụtara site Ziri Ezi Games.
Nke a version nke egwuregwu na-egwuri na edoghi nke omenala egwuregwu nke na-egwuri na isii na redio nke mgbe kaadị. The kaadị na-shuffled tupu mmalite nke ọ bụla gburugburu. Nke a oghere igwe free bonus ezigbo ego game enye ohere asaa ndị na-anọdụ n'otu table. The egwuregwu, Otú ọ dị, adịghị egwu megide onye ọ bụla ọzọ. Kama, onye ọ bụla nke egwuregwu na-akpọ megide dealer. Ọ bụrụ na ị chọrọ imeri na egwuregwu a, ị chọrọ imeri dealer. Nke a nwere ike mere a ọtụtụ ụzọ. Ọ bụrụ na ị akara ọzọ ihe karịa ya ma-anọ n'okpuru 21 ihe mgbe ị na-emeri. Ọ bụrụ na ị akara a blackjack na gị mbụ kaadị, mgbe i nweta. Ọ bụrụ na ndị na-ere na-aga na na mgbe ahụ nakwa na ị na-emeri.
Ịkụ nzọ nso awa site a oghere igwe free bonus ezigbo ego game bụ nnukwu. N'ihi ya, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-a newbie ma ọ bụ a elu ala, ị ka ga-enwe egwuregwu. Ị na-enwe ike igwu egwu ruo 5 aka n'out oge na egwuregwu a. Nke a ga-ruo 3 aka na smartphones maka mma ikiri. Ị na-nhọrọ nke Guzosie, see, Kewaa, na Insurance na i nwere ike ikpebi ihe ọ mgbe kaadị na-mesoo.
The isi atụmatụ nke egwuregwu ndị dị ka ndị:
Megharịa nzọ, Ugboro abụọ Bet, Wepu, na Clear All mkpọchi na-nyere maka ezigbo ịrụ ọrụ nke game.
Nke a version nwekwara adọ aka ná ntị gị n'ọdịnihu ma ọ bụrụ ọ bụla nke gị na omume na-aga nwere a-ezighị ezi mmetụta
The kaadị na mgbawa isi chọta bụ nnọọ ezigbo.
Nke a oghere igwe free bonus ezigbo ego bụ egwuregwu a n'ezie dị mma version nke kpochapụwo egwuregwu nke nwere ike na-enwe na gị na ama ma ọ bụ mbadamba nkume.